၂၀၂၁ တွင် LEGO UCS Millennium Falcon ကို ၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြချက်ငါးချက်
LEGO ၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြချက်ငါးချက် Star Wars 75192 ခုနှစ်တွင် 2021 ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်
14 / 10 / 2021 18 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 351 Views စာ 1 မှတ်ချက် 10179 ထောင်စုနှစ် Falcon, 10188 မရဏစတား, 10221 စူပါစတား Destroyer, 75105 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75159 မရဏစတား, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75212 Kessel ထောင်စုနှစ် Falcon Run, 75252 မှာ Imperial စတား Destroyer, 75257 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75313 ကို AT-AT, Lego, Lego Star Wars, LEGO.com, ထောင်စုနှစ် Falcon, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, Zavvi
Lego Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ယခုဆိုလျှင်စင်ပေါ်သို့ရောက်နေတာလေးနှစ်ကျော်ပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒါက ၂၀၂၁ မှာမင်း ၀ ယ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး set ဖြစ်နေတုန်းဘဲ။
LEGO သိပ်မများပါဘူး Star Wars အစုံသည်အသက်ရှည်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falconမရ။ ၁၀၁၈၈ သေမင်းစတားသည်အချိန်အတော်ကြာတွင်ရှိနေခဲ့ပြီး၎င်း၏ဆက်ခံသူ ၇၅၁၅၉ သေမင်းစတားသည်လည်းခဏတာမျှဝိုင်းရံထားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် Falcon ရဲ့စံချိန်ချိုးတဲ့အပိုင်းအရေအတွက်နဲ့စျေးနှုန်းကို ၂၀၁၇ မှာဖြန့်ချိတဲ့အခါအမြဲစိမ်းထုတ်ကုန်တစ်မျိုးလိုဖြစ်သွားတာကိုမြင်ရတာနည်းနည်းတော့အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။
၎င်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသည် LEGO Group သို့သော်အနိုင်ရသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူရန်ဆန္ဒရှိပါသည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံးမှဖြစ်သည် ထိပ်တန်း LEGO အစုံအလင် 20 အကြောင်းပြချက်အတွက်စာရင်း!) သင်စစ်ဆေးနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် of 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ဤမယုံနိုင်စရာအစုံ၏ရှုထောင့်အားလုံးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရန်၊ သို့သော်၎င်းသည်အကောင်းဆုံး LEGO ဖြစ်နေသေးသည့်အကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပါ။ Star Wars ငွေသတ်မှတ်ပြီး ၂၀၂၁ တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
၅ - ၎င်းသည်အကြီးဆုံး LEGO ဖြစ်သည် Star Wars အမြဲသတ်မှတ်ထား
ဟင့်အင်း၊ ၇၅၂၅၂ Imperial Star Destroyer ဒါမှမဟုတ် ၁၀၂၂၁ Super Star Destroyer တို့လောက်တော့သိပ်မကြာပါဘူး၊ သူ့ရဲ့အမြင့်အတွက်ဘာဆုမှရမှာသေချာတယ်။ သို့သော် ၇၅၄၁ အပိုင်း၊ အခြား LEGO မရှိပါ Star Wars set သည်ပါ ၀ င်သောဒြပ်စင်များ၏အတိုးအကျယ်ပမာဏနှင့်နီးသည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon။ အဆိုပါ ကောလဟာလသတင်းများအရ ၇၅၃၁၃ AT-AT သည်သရဖူကိုယူနိုင်ခဲ့သေးသော်လည်းယခုအချိန်တွင်နဂါးငွေ့တန်းတွင်အကြီးမားဆုံးအစိုင်အခဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်သည်ဤနေရာတိုင်၌အခိုင်အမာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၄ - ၎င်းသည်အခြား Falcon အားလုံးကိုအမှိုက်ပုံဖြစ်စေသည်
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါမရဘူး။ ၇၅၁၀၅ ထောင်စုနှစ် Falcon၊ ၇၅၂၁၂ Kessel Run Millennium Falcon နှင့် ၇၅၂၅၇ Millennium Falcon တို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်ကြီးမြတ်သည့်အစုံ၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းတံဆိပ်များနှင့်art ဆရာမတွေကို ဒါပေမယ့်ဘေးမှာ 75192 ထောင်စုနှစ် Falconသူတို့ကနှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။
သတင်းကောင်းကတော့ Ultimate Collector Series set ကို ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့တစ်ခြား Falcon the တိုင်းကိုလျစ်လျူရှုနိုင်တယ် LEGO Group တုန်လှုပ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းအရ - နည်းပညာပိုင်း - မင်းကအနာဂတ်ကို ၀ ယ်ယူခြင်းကနေမင်းကိုကယ်တင်နေတယ် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ဒီနေ့ ရပါတယ်။
၃ - ၎င်းကိုပြသရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်
ရပ်နေတာလား။ သေချာပါတယ်။ display ကိစ္စတွင်လား။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ။ ကော်ဖီစားပွဲပေါ်မှာ? ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ။ ဤအရာသည်သင်ပြသနိုင်သောနည်းလမ်းအချို့သာဖြစ်သည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon၎င်းသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာ ၂၁ လက်မ၊ ၈၄ စင်တီမီတာရှည်။ အကျယ် ၅၆ စင်တီမီတာရှိသည်။
သင်ပြသည့်နေရာကိုအလွန်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန်လိုသည်၊ သို့သော်တတိယမြောက် partiDisplayit အပါအ ၀ င်ထုတ်လုပ်သူများသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုကူညီနိုင်သည်။ ၎င်း၏စစ်ဆေးပါ Millennium Falcon display ပြပွဲ သို့မဟုတ်၎င်း၏တစ်ခုခု Millennium Falcon display ကိစ္စများ ဥပမာ။
၂ - ၎င်းသည်ကြီးစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်
75192 ထောင်စုနှစ် Falcon အနားယူရန်ရက်အနည်းငယ်ကျန်သေးသည်။ ၎င်း၏ထွက်ရက်စွဲကို ၂၀၂၂ နှစ်ကုန်အထိထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင် LEGO အငြိမ်းစားအိမ်ကြီးသို့ပျံသန်းသောအခါအစုံအားလုံးနောက်ဆုံးတွင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်၊ ဤ behemoth သည်သေချာပေါက်ပစ်လိမ့်မည်။ စျေးကွက်တွင်စျေးနှုန်းရှိသည်။
LEGO.com မှာရောင်းမထွက်သေးတဲ့အကြောင်းအရင်းရှိတယ်၊ အဲဒါကြောင့်လူတိုင်းကလိုချင်တုန်းဘဲ၊ သူတို့က 10179 Millennium Falcon မတိုင်ခင်ကအတိုင်းဘဲ၊ အဲဒါပြီးသွားရင်ဆက်ဖြစ်နေမှာသေချာတယ်။
၁ - ၎င်းကိုလောလောဆယ်ကြီးမားသောလျှော့စျေးဖြင့်ရနိုင်သည်
သတင်းကောင်းသည်သင်၏လက်ကိုရယူရန် LEGO.com ရရှိနိုင်မှုကိုအားမကိုးလိုပါ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon လောလောဆယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့သတင်းကဒါပဲ Zavvi လောလောဆယ်၎င်းကို massive ၁၀၀ အထူးလျှော့စျေးဖြင့်ရနိုင်သည် Brick Fanatics'သီးသန့်ကမ်းလှမ်းချက် ဤစာမျက်နှာ၏ပင်မစာမျက်နှာ၊ ပင်မစာမျက်နှာ (သို့) မည်သည့်စာမျက်နှာကိုမဆိုရိုးရှင်းစွာနှိပ်ပါ တွဲဖက်လင့်ခ်များ သင့်လျှော့စျေးကိုရယူရန် ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင် ငွေရှင်းသည့်အခါ ကုဒ် 100FANATIC ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဤသဘောတူညီချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် ၂၃.၅၉ ယူကေတွင်သင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံခွင်၌ Zavvi ၏အကောင်းဆုံး Black Friday ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူယနေ့အထိရှိနေပါစေ Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ဒီလနိုဝင်ဘာလစာမျက်နှာများ
အပ်ဒိတ်: 75192 Millennium Falcon သည်ယခု Zavvi တွင်ရောင်းကုန်သွားပါပြီ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင်၏မိတ္တူကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon Zavvi မှကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Ideas ပထမဆုံး ၂၀၂၁ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရလဒ်များကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
Lego Batman set သည် LEGO အသစ်ကိုထုတ်ပြသည် Star Wars ထို့အပွငျ →
တစ်ခုမှာ "LEGO ၀ ယ်ရန်အကြောင်းပြချက်ငါးချက် Star Wars 75192 ခုနှစ်တွင် 2021 ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်"
16/10/2021 at 13:38
မင်းခင်ပွန်းကအဲဒါကိုမင်းခွင့်ပြုရင်သူကနောက်ထပ် Lego ကိုဘယ်တော့မှ ၀ ယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖို့အာမခံချက်ရှိပါသလား Star wars ထပ်မံသတ်မှတ်သည်